Iyini imibala yezinwele ze-3D? Ubuchwepheshe bokudaya izinwele ze-3D: isithombe namavidiyo.
Izici zenqubo ye-3D hair coloring.
Umbala wezinwele ze-3D namuhla ungenye yezinsizakalo ezithandwayo kakhulu zezingubo zokuhleka ezifashisayo. Lobuchwepheshe buhlukile kumuntu wendabuko, njengoba kungaguquki umbala wesikhumba kuphela, kodwa futhi kudala umphumela wokukhohlisa okubonakalayo. Ngenxa yalokho, kubonakala kubonakala kakhulu futhi kukhangayo. Inqubo lapho umphumela onjalo uthola khona kunzima kakhulu, kodwa uma uzibona esibukweni, uzobona ukuthi kuwufanelekile.
Okokuqala, okushiwo yile nqubo kuwukugcwaliseka kokuguquguquka kakhudlwana kwama-shades ahlukene. Umbala wemvelo wezinwele zomuntu kunalokho ungenangqondo futhi kunoma yikuphi ukuhlomula ngokufaka umbala we-glare. Ngakho-ke, isisekelo se-3D-ibala - ama-shades amabili noma amathathu ombala ofanayo, ohamba ngokushelela komunye nomunye.
Kungani kudonsa i-3D kudume kangaka?
Akuyona imfihlo ukuthi eminyakeni embalwa edlule ekugqibeleni ubuhle bemvelo, futhi le nqubo ikuvumela ukuba ufeze umphumela omuhle ngaphandle kokuphazamisa umbala wemvelo wezinwele zakho. Ivumela nje izinwele zakho ukuba ziqale ukudlala ngemibala emisha. Izinwele zizolungiswa kangcono futhi akudingeki ukuba uhlale uzibophezele izimpande, okubangela izinkinga eziningi.Uma ufuna ukubuyisela umbala wakho wezinwele zemvelo, i-3D-staining iyoba yisinqumo esinengqondo kunazo zonke. I-3D-Umbala ifana nombala, nokho, ngokungafani nayo, umbala. Ngenxa yalokhu uthola umbala omuhle odlala ngokushisa elangeni futhi obonakalayo enezela emvongeni wezinwele.
I-3D-staining - inqubo
Uzodinga amahora amane konke. Inqubo yinde, kodwa umphumela uwufanele.
Okokuqala, inkosi izopenda izimpande zakho. Ngale ndlela, uqondanisa umbala wezinwele, futhi unezela ivolumu ebonakalayo kubo. Ukuze umbala izimpande, upende usetshenziselwa ithoni elimnyama kunomthunzi ophansi owawunqume ukuyisebenzisa.
Ukuze umbala ofanelwe, inkosi izohlukanisa izinwele zakho zibe izingxenye eziningana futhi isebenzise ubude ubude bayo obugcwele. Lokhu kuwumsebenzi onzima kakhulu, njengoba kuzokwenzeka phakathi kwethembo elimnyama nelincane. Kumele kuqashelwe ukuthi ubukhulu bezintambo kufanele buxhomeke esimweni sezinwele. Isibonelo, uma izinwele ziqondile, udinga ukuthatha i-strand encane, i-fluffy-wide.
Kubaluleke kakhulu ukusebenzisa amaphini akhethekile ukuze ama-shades angahlanganisi. Ungawahlukanisa nge-foil, kodwa amakhosi amaningi ayawagwema lokhu, ngoba acabanga ukuthi ahlukumeza izinwele.
Uma inkosi iqedile umsebenzi oyodinga ukubamba upende ngezinwele zakho ngomunye imizuzu engu-15.
Yilokho, umsebenzi usuqedile. Ihlala isomile, ubeke izinwele zakho futhi ujabulele umphumela.
Umbala wezinwele ze-3D - ividiyo
Imikhiqizo yokusheshisa ukukhula kwezinwele
Ukubala kanjani izinwele zami ezimpunga?
Basma for izinwele: zokupheka for imibala ekhaya
Izandiso zezinwele, izindlela
Umshado ohlakaniphile kakhulu emhlabeni
Ukuvuvukala kwamapayipi (i-pneumonia)
Ithonya lemidlalo yezemidlalo empilweni
Yini indoda ephupha ngayo embhedeni?
Ngenxa yalokho okukhona i-cellulitis nokuthi ungayilahla kanjani?
I-Creamy isobho sesobho
Isobho seSchwerin ushizi
Ukuthwala: izimpawu, ukwelashwa ngesikhathi ukhulelwe
Indlela yokukhetha umbala wezingubo ngombala